Hatraiza ny maha-zava-dehibe ny fahasarotana ara-batana amin'ny fifandraisana? 7 zavatra tokony hodinihina. - Fifandraisana
Rehefa mieritreritra ny karazana mpiara-miasa dia hiafara amin'ny - na iza isika te hiafara amin'ny - angamba isika mieritreritra ny endrik'izy ireo aloha.
Ny safidin'izy ireo sy ny fomba fiainany dia mety ho faharoa manintona antsika ara-batana mafy. Ary tadiavinay hatrany am-piandohana izany fisarihana izany.
Ny marina dia, raha mila fifandraisana salama sy maharitra ianao, dia mila mandinika ny fifandraisanao amin'ny olona amin'ny lafiny rehetra.
Rehefa dinihina tokoa, tsara ny fisarihana ara-batana, saingy afaka manangana rehefa mandeha ny fotoana - tsy dia miova ny toetran'ny olona iray!
Noho izany, ny fanontaniana dia hoe: manao ahoana ny maha-zava-dehibe ny fisarihana ara-batana amin'ny fifandraisana raha oharina amin'ny endrika hafa rehetra?
Manan-danja indrindra ve ny bika? Tokony hanao izany ve izy ireo?
1. Misarika endrika maro ny fisarihana.
Aza adino fa ny fisarihana ara-batana dia tsy ny endrika manintona irery! Misy fomba hafa hifandraisana amin'ny sakaizanao ary hahaliana azy ireo.
Ny fitadiavana ny olona miaraka aminao dia zava-dehibe, fa mbola afaka mamorona fifandraisana tsara amin'ny olona iray ianao ary ny lafiny ara-batana dia afaka manangana rehefa mandeha ny fotoana.
Mety tsy maniry olona eo noho eo ianao, fa afaka mampihomehy anao amin'ny fomba feno izy ireo ary mahatonga anao hahatsapa ho toy ny olon-kafa ao amin'ny efitrano. Izany dia toetra manintona tena manintona hananana, marina?
Eritrereto ny zavatra tsapan'ny olona iray ary manintona anao amin'izany na tsia izy na tsia.
Betsaka amintsika no voasasa atidoha amin'ny fieritreretana fa mila mihaona amin'ny 'karazana tonga lafatra' ary mametraka blinkers amin'ny ankapobeny rehefa manomboka mampiaraka. Mihidy izay tsy mifanaraka amin'ny bobongolo noforoninay tao an-dohanay izahay, ary tsy manome fotoana hafa ny fisarihana hafa.
Fa tokony isika satria…
2. Ny fisarihana maharitra no zava-dehibe kokoa.
Ny fisarihana ara-batana sasany dia vetivety ary afaka miala sasatra, mamela anao samy hahatsapa ho somary very hevitra ny amin'izay nalehan'ny spark.
Raha ny ihany ny zavatra tianao amin'ny vadinao dia ny fijerin'izy ireo, tsapanay fa mety tsy haharitra ela ny fifandraisanareo…
Na dia tsara aza ny tena manintona ny olona miaraka aminao dia mila mieritreritra ny fomba hiasa maharitra ianao.
Nilaza ny rehetra fa tokony hanambady ny namanao akaiky indrindra ianao - ahoana raha marina ny azy ireo?
Ny fahalalana marina ny olona iray sy ny fitiavany azy dia mihoatra lavitra noho ny fijery - ary izany no mampiorina ny fifandraisana salama sy maharitra.
3. Angamba mila spark ianao.
Andao hanao ny marina - ny ankamaroantsika dia maniry ny ho voasariky ny mpiara-miasa amintsika ara-batana. Izahay dia mitady spark, ary maniry hanao firaisana tsara izahay.
HO AN'NY SASANY olona, ​​ny fisarihana ara-batana dia zava-dehibe kokoa noho ny fanararaotana olona iray tsy nahasarika azy ireo.
Zon'ny tsirairay ny mandray fanapahan-kevitra samirery momba ny daty hampiarahany, noho izany, raha tsapanao fa tena mila an'io fanintonana ara-batana io ianao, tsy maninona ny mandà ny olona tsy tsapanao izany!
Tsara ny mijanona ho malala-tsaina satria ny fisarihana tena izy dia mety hivoatra rehefa mandeha ny fotoana. Saingy safidinao ny habetsaky ny fotoana sy ny ezaka tianao hampiasa vola amin'ny olona iray hamelana io fanintonana ara-batana io hitombo.
4. Raha zava-dehibe ny firaisana dia mila mitady fomba ianao.
Noho izany, ny fanintonana ara-batana angamba tsy ny zava-dehibe indrindra amin'ny fifandraisana - fa misy fiantraikany amin'ny fiainanao ara-nofo izany.
Raha zava-dehibe aminao ny firaisana dia mila manja olona ianao raha te hanao firaisana tsara tsy tapaka.
Raha mandany fotoana hahafantarana olona iray ianao ary manomboka mahita azy ireo manintona amin'ny fomba hafa, dia mety mbola afaka miaraka miala voly be ianao miaraka.
Ho an'ny olona sasany, na izany aza, manomboka mahatsapa ho tery kely izy…
Angamba ianao sahirana amin'ny fitiavana sy firaiketam-po amin'ny vadinao satria tsy manintona ny endrik'izy ireo fotsiny ianao. Tsy maninona ny hanaiky izany ho anao!
Ny sasany amintsika dia mahatsapa ho meloka tokoa amin'ny famoahana olona iray, fa tsara kokoa ny milaza ny marina raha vao tsapanao fa ny manintona fotsiny dia tsy ampy raha tsy misy zavatra ara-batana kokoa.
Amin'izany fomba izany, tsy manome fanantenana diso na mitarika azy ireo ianao. Manao ny marina fotsiny momba izay tadiavinao sy ilainao amin'ny fifandraisana ianao, ary izany no fomba tsara indrindra sy mahitsy indrindra hiatrehana ny toe-javatra.
5. Ataovy araka ny tokony ho izy ny zavatra antenainao.
Angamba tsy mieritreritra olona amin'ny fomba ara-batana ianao satria efa voafetrao amin'ny fombanao.
Mety manana karazana tadiavinao foana ianao, na mety maka sary an-tsaina ny tenanao miaraka amin'ny olona mikarokaroka rehetra ny boaty - ara-pientanam-po SY ara-batana.
Na dia tsara aza ny manana fenitra avo lenta, dia mety hisakana anao tsy hanangana fifandraisana tena izy amin'ny olona iray izay tsy mifanaraka amin'ny faktiora andrefesana azy ireo.
Diniho raha mitombina ny zavatra tadiavinao amin'ny mpiara-miasa na tsia - ary mandanjalanja izay zava-dehibe kokoa aminao.
Ianao ve mitady olona izay 100% amin'ireo toetra amam-panahy tianao, fa 50% fotsiny no voasintonao?
ahoana no ho tsara tarehy rehefa ratsy tarehy ianao
Sa ianao mitady ilay olona manana 100% ny karazanyo amin'ny endrika ivelany fa ny 50% -n'ireo boaty mifamatotra amin'ny toetra amam-panahy, soatoavina ary fomba fiaina fotsiny no tadiavinao?
Tsy afaka milaza aminao izahay hoe inona ny valiny, na tokony hisy, fa mendrika ny handinika izay tena zava-dehibe aminao.
Rehefa dinihina tokoa, ny olona dia afaka mahazo bolo sy akanjo amin'ny fomba hafa, saingy tsy hanova ny soatoaviny izy ireo amin'ny alina.
6. Mety hitombo ny fahasarotana rehefa mandeha ny fotoana.
Aza adino fa afaka mampivelatra fanintona olona ianao rehefa mandeha ny fotoana!
Ny media sosialy dia manandrana mandresy lahatra antsika fa mila vady mafana isika, mila miakanjo fomba iray isika, mila miverina mivantana amin'ny alina… somary tsy misy dikany izany ary adinontsika fa tsy ny mpivady rehetra no manana daty voalohany mipoaka!
Ireo mpivady hitanao manerana ny Instagram izay toa 'tonga lafatra' dia mety nanomboka ho mpinamana fotsiny.
Mety tsy nifankatia avy hatrany ny ray aman-dreninao, fa lasa nifankatia izy ireo rehefa nahalala bebe kokoa.
Tsarovy izany ny fisarihana tena izy amin'ny lafiny rehetra dia mihoatra ny fitiavan'ny olona iray aza , ary afaka mivoatra rehefa mandeha ny fotoana.
Tonga amin'ny fotoana hijerena olona iray ianao ary tsy hieritreritra intsony hoe lehibe loatra ny orony na tsy tototry ny tombokavatsa izy ireo - ho hitanao kosa ny hatsaram-panahin'izy ireo, ny fomba hampihomehezany anao, ary ny fomba azo antoka. mampahatsiaro anao izy ireo.
7. Ny soatoavina sy ny fomba fiaina no zava-dehibe kokoa.
Ka inona no zava-dehibe amin'ny fifandraisana - hafa noho ny fijery?
Ny fitazonana soatoavina mitovy amin'izany, araka ny efa niresahanay, dia tena zava-dehibe raha tianao ny fifandraisanareo Raha ny marina asa.
Fahafinaretana olona iray mahafinaritra, fa samy manana ny finoany ve ianareo? Olona fianakaviana mahita ny ray aman-dreninao indray mandeha isan-kerinandro ve ianao, ary, raha izany, ho zava-dehibe aminao ve raha mahita izany hafahafa ny vadinao?
Angamba olona maraina ianao ary tia mifoha amin'ny kilasy yoga amin'ny sabotsy 6 maraina - hisy fiatraikany amin'ny zavatra ve izany raha tian'izy ireo misotro miaraka amin'izy ireo ny zoma alina rehetra?
Mety halanao fa mandany ny lalao kilalao miaraka amin'ny namana izy ireo rehefa maniry fotoana misy kalitao sy fiaraha-misakafo hariva mahafinaritra fotsiny ianao.
Ny zavatra toa itony dia matetika no tsy raharahantsika amin'ny maika ny hivady amin'ny olona iray izay tena mahasarika antsika amin'ny sehatra ara-batana.
Na dia mahavariana aza ny fientanam-po miaraka amin'ny olona tadiavinao, ny fisarihana lalina sy ny fifanarahana no fototry ny fifandraisana matanjaka sy salama.
Ka inona no maha-zava-dehibe ny fisarihana ara-batana amin'ny fifandraisana?
Eny, ho anao ny manapa-kevitra.
Mila mieritreritra momba izay tena sarobidy aminao ianao, izay tadiavinao amin'ny mpiara-miasa aminao, ary ny fomba ahatsapanao ny fifandraisanao.
Raha mieritreritra ianao fa ny fanintona ara-batana no lafiny manan-danja indrindra amin'ny fifandraisana, dia mety ho faly ianao mamela ny lafiny hafa amin'ny fifandraisana. Mety ho faly marina amin'ny mpiara-miasa tena tadiavinao ianao, ary vonona hanaiky fa tsy manana fifandraisana lalina kokoa ianao.
iza i selena gomez mampiaraka izao
Raha toa ny nofy ratsy indrindra nataonao izany dia avelao ny fisarihana ara-batana hipetraka kely any aoriana. Mbola mety ho zava-dehibe io, fa tsy mila ho zavatra voalohany na manakiana indrindra tadiavinao ao amin'ny mpiara-miasa.
Mbola tsy azonao antoka hoe zava-dehibe ny manintona anao? Miresaka an-tserasera amin'ny manam-pahaizana momba ny fifandraisana avy amin'ny Relationship Hero izay afaka manampy anao hahalala zavatra. Tsotra.
Afaka mitombo ve ny fisarihana? (+ Ahoana no fomba hahasarika olona iray)
ny fomba hiatrehana ny maha empath intuitive anao
samy adala daholo isika eto
firy ny zanakavavin'i eminem